China SEBIC 700c n'etiti igwe eletriki igwe na-eme njem okporo ụzọ obodo igwe eletriki igwe eletriki na ndị nrụpụta | Funncycle
SEBIC 700c mid motor hydraulic brek n'okporo ụzọ igwe eletriki igwe
Site na ijikọta nka anyị na E-Bikes na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ sitere na Shimano, Tektro na ụdị ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè, anyị na-achọ iwetara gị igwe elektrik ugwu kachasị mma n'ahịa.
Akụkụ ụkwụ ỌZỌ
Moto Brushless, 36V 200W Mid Motor-Bafang M800
Ogo kwa Ike 10 - 30 km
Nọmba nlereanya BEF-EEL700M
Ụba 700 * 28C alloy alloy 6061, TIG gbanye
Ndụdụ Aluminom 700C, TIG welded
Taya INNOVA 700 * 28C A / V Nwa
Gear Ntọala 9 ọsọ
Batrị 36V 7.8AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Njikwa Onye na-ejighị egwu mmiri na-arụkọ ọrụ na moto
Ịdị mma Dị elu: Site na ijikọta nka anyị na E-Bikes na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ sitere na Shimano, Tektro na ụdị ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè, anyị na-achọ iwetara gị igwe elektrik ugwu kachasị mma n'ahịa.
Okpokoro na Nkwusi: Site na otu ikpo okwu dika Monta, igwe eletriki igwe eletrik kacha ewu ewu. A na-eji ngwa ngwa arụ ọrụ ma nwalee aluminom alloy na mkpọchi mkpọchi mkpọchi. Monta X ka bụ ngwakọta zuru oke nke ịdị arọ dị mfe, arụmọrụ dị mma ma na-adịte aka.
Batrị na moto: Ejiri 250W abụọ na-aga n'ihu, ị ga-eju anya site na arụmọrụ ya n'ịrịgo ugwu ma na-emeso ọnọdụ ụzọ dị iche iche (dịgasị). Igwe batrị lithium Samsung 36V nke nwere ike iwepu abuo na-enye ohere ka ogologo na ike di ike. Ọdụ USB arụnyere na batrị na-enyere gị aka ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ gị nke ọma n'oge njem.
Ịnyịnya mgbanwe: Shimano shifter, crank na derailleur na-eme ka mgbanwe dị nro dị n'etiti nrịba dị iche iche. Igwe ihe nkiri 14-34T Mega Range Cassette na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịrị ugwu ma jiri ya maka ebumnuche na-apụ apụ. Na mgbakwunye na mkpịsị aka mkpịsị aka, 5 ọkwa nke pedal-enyemaka enyere iji mejuo mkpa gị n'oge ọ bụla.
Tekinoloji Ntuchi Kwadoro: Dị ka teknụzụ nkwụsị kachasị mma n'ahịa, Tektro diski breeki na-ahụ maka nchekwa gị na ihe mmetụta breeki ejikọtara iji belata ike mgbe ị na-etinye breeki.
Ngosipụta na ngosipụta: Ihe ngosi LCD na-enwu enwu na-enye gị ozi niile ịchọrọ n'oge ịgba ọsọ ahụ, dịka ọsọ, ọkwa ụkwụ na-enyere aka, ọkwa batrị, njem njem, wdg. Monta nwekwara ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ, iji hụ na nchekwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem n'abalị.
Nke gara aga: SEBIC 26 nke anụ ọhịa anụ ọhịa abụba na-ama nri osimiri n'etiti igwe eletriki igwe eletriki
Osote: SEBIC 20 nke anụ ọhịa aluminom zoro ezo batrị mpịachi igwe eletrik